तीन महिनादेखि हराएका चंखेली गाउँपालिका–२ दार्मा गर्खाका १४ वर्षे शैलेन्द्र शाहीको मृत्यु भएको कंकाल भेटिएको छ। गएको साउन महिनाको १ गतेका दिनमाा धुम्माधारा र्खकबाट दूध, दही लिएर साउने संक्रान्ति मनाउनका लागि घरमा आउँदै गर्दा बीचबाट हराएका थिए। मृत्यक शाही दार्माको नजिकै पर्ने ताँमेखोलाबाट…
स्कुल बस दुर्घटना, १५ विद्यार्थी घाइते
तस्बिर:अन्नपुर्ण पोष्ट ८ असोज । दाङमा तुलसीपुरमा विद्यार्थी बोकेको स्कुल बस दुर्घटना भएको छ । गोरखा माध्यमिक विद्यालय तुलसीपुरको रा १ क १९९ नम्बरको बस सोमबार दुर्घटना हुँदा कम्तिमा १५ विद्यार्थी घाइते भएका छन् । विद्यार्धीलाई घर छोडनको लागी ५०…
डा.नवराज केसी बालरोग विशेषज्ञ, मध्येपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेत बालबालीका वर्षाको समयमा पानीमा भिज्छन् । त्यसले स्वास्थ्यमा कस्तो असर पर्छ ? वर्षाको समयमा विशेषगरी ढलबाट फोहोर पानी बगेर आउँछ । बच्चाहरु ढलको पानी वा आकाशबाट आएको पानीमा भिज्ने गर्दछन् । जसले गर्दा…
नवलपुरको बुलिङ्टार(६ अत्रौलीस्थित शिव माध्यामिक विद्यालयका प्रध्यानाध्यापकले कुटेर विद्यार्थीको कान नै फुटाइदिएका छन् । निर्धारित समयभन्दा विद्यालयमा १५ मिनेट ढिला आएको भन्दै प्रध्यानाध्यापक ओमकुमार श्रेष्ठले कक्षा १० मा अध्ययनरत खुमान सार्की नेपालीलाई कुटपिट गरेका हुन् । घाइते खुमानको कानबाट रगत बगिरहेको छ ।…
हुम्लाको नेक्पामा सुक्खा पहिरो खस्दा दुई जनाको मृत्यु, एक वेपत्ता : चार जना घाईते
३० भाद्र सिमकोट । शनिवार दिउँसो खसेको सुक्खा पहिरोमा परि हुम्लाको चंखेली गाउँपालिका वडा नम्बर ५ नेक्पामा दुई जनाको मृत्यु भएको छ। एक जना बालिका वेपत्ता भएको जनाइएको छ । पहिरोमा परि चंखेली गाउँपालिका वडा नम्बर ५ की २४ वर्षीया बसन्ती तामाङ र १३…
१८ भाद्र । सल्यान जिल्लाको बागचौर नगरपालिका–१२ ओख्रेनी मुलखोलामा आएको पहिरोमा परी बेपत्ता भएका एकै घरका तीन जना बालबालिका मृत फेला परेका छन्् । आइतबार साँझ स्थानीय बालाराम डाँगीको घर पहिरोले पुर्दा बेपत्ता भएका डाँगीका २ छोरी र १ छोरा मृत अवस्थामा फेला परेका…
काठमाडौं - समितिले प्रत्येक चार महिनामा देशभरी बालबालिका माथि भएका घटनाबारे तथ्य संकलन गर्दै आएको छ। पछिल्लो चार महिनामा बालश्रम र बालबालिकामाथि बलात्कारका घटना बढेका छन्। केन्द्रीय बालकल्याण समितिले सोमबार सार्वजनिक गरेको चौमासिक प्रतिवेदनमा बालबालिकामाथि बालश्रम र बलात्कारको घटना बढेको…
बालबालीकालाई के सिकाउने र कसरी ?
२४ साउन । बालबालीकाको पहिलो पाठशाला घर र दोस्रो पाठशाला विद्यालय हो । घरमा अभिभाबक वा परिवारका सदस्यले गर्ने क्रियाकलाप बालबालीकाले आफ्नो व्यबहारमा देखाउने गर्दछन् । विद्यालयमा सिकेका कुरालाई नै बालबालीकाले बढी विश्वास गर्छन । साना बालबालीकालाई सिकाईमा कसरी जोड्न सकिन्छ ?…
२२ साउन । निशान खड्का नाम गरेका ११ वर्षीय बालक आइतबार साढे चार बजेदेखि हराए । हराएको लामो समयसम्म उनी सम्पर्कमा आएनन् । उनका बुबा अहिले वैदेशिक रोजगारीमा छन् । आमा चमेली खड्काको मोबाइलमा अपरिचितले राति ९ बजे बच्चा अपहरणमा परेको र ४० लाख फिरौति…
कोहलपुरबाट बालकको उद्धार
१६ साउन । नेपाल प्रहरीले एक बालकको उद्धार गरि परिवारको जिम्मा लगाएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्वर ७ का सर्जन सिंह ठकुरीको दश वर्षको छोरा सुशान्त ठकुरीलाई सुर्खेबाट लैजाने क्रममा एक दम्पती कोहलपुरमा पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा काभ्रे कासीखण्ड नगरपालिका…